XOG XASAASI: Shariif Sh. Axmed oo ka digay qatarta weyn ee ku soo socota dhismaha ciidamada qalabka sida, Sabab! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Shariif Sh. Axmed oo ka digay qatarta weyn ee ku...
XOG XASAASI: Shariif Sh. Axmed oo ka digay qatarta weyn ee ku soo socota dhismaha ciidamada qalabka sida, Sabab!
Madxweynihiii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sh. Axmed
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inay qatar weyn ka soo socoto dhismaha Ciidamada qalabka sida, isagoo xusay in Nabadsugida ay bilowday inay ciidamo qorato.
Shariif Sheekh Axmed, ayaa sheegay in uu shaki badan ka qabo qaabka loo qoraayo Ciidankaan cusub ee nabad suggida ah oo qaarkood dalka dibadiisa tababar loogu qaaday si gaar ah labo dal oo kaliyah.
Wuxuu kaloo xusay, in aysan aqbaleyn in Ciidamo gaar ah loo sameysto in dad gaar ah lagu dhibaateeyo.
“Khatar weyn ayaa ka soo socota dhismaha ciidamada qalabka sida, ciidan habeen la qoraayo oo nabadsugida qoreyso oo labo dowladood kaliya loo dirayo aniga ma fahmin, ciidanka nabadsugida qoreyso, oo laga qarinayo taliyeyaasha ciidankaas ma waxaa loo sameynayaa inay amniga sugana, mise inay qabtaan howlo kuwo ka horeeyay ku fashilmeen, ciidan gaar ah oo loo sameysanayo in dad lagu dhibaateeyo annaga ma aqbaleyno”ayuu yiri Madaxweynihii hore Sheekh Shariif.
Ugu dambeyn, hadalka Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa yimid xilli Ciidamo tababaro loogu qaaday dalalka Eritrea iyo Qatar, oo aan horay uga mid aheyn dalalkii Ciidamada loogu soo tababaray Soomaaliya sanadihii u dambeeyay.
ciidamada qalabka sida
qatarta ku soo socota